नेपालमा सेक्स-खेलौना को ह्वातै बढ्यो ब्यापार, कस्ता ‘सेक्सटोयज’ मा आकर्षित छन नेपाली महिलाहरु ? - Nepali Sandes
नेपालमा चार वर्षअघि मात्रै सुरु भएको ‘सेक्स टोयज’को ब्यापार बढ्न पुगेको छ । बैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा श्रीमान श्रीमती छुट्टिएर बस्नेको संख्या बढेसँगै सेक्स टोयजको ब्यापार पनि बढेको हो । लिङ्ग र योनी आकारका कृतिम मैथुन सामग्रीबाट आनन्द दिने साधनलाई सेक्स टोयज भनिन्छ । राजधानीको न्यूरोडमा हाल ३ वटा ‘सेक्सटोयज’ पसल संचालनमा रहेका छन् । चाइनाबाट निर्यात हुने सेक्सटोयज सिलिकनबाट बनेको हुन्छ । १ हजार ५ सय देखि ५० हजारसम्म मुल्य पर्ने सेक्सट्योज न्युरोडमा पाइन्छ । प्राकृतिक मैथुनजस्तै आनन्द हुने भएकाले श्रीमान श्रीमती बिछोडिनेहरु सेक्स टोयज किन्न आउँछन् । सुरुसुरुमा अप्ठेरो मान्ने गरे पनि सेक्स टोयज प्रयोग गर्नेहरुको संख्या विस्तारै बढ्ने गरेको छ ।
पछिल्लो पटक सेक्सटोयजको ब्यापार बढ्दै गएको नाइस एन नट्टीका संचालक प्रवीण ढकाल बताउँछन् । उनको पसलमा पनि धेरैजसो श्रीमान श्रीमती छुट्टिएर बसेका महिला तथा पुरुष ग्राहकहरु सेक्स टोयज किन्न आउँछन् । महिलाहरुले बढी र्याबिट, जि–स्पट र डिल्डो जस्ता लिङ्ग आकारका भाइव्रेटर भएको टोयज बढी प्रयोग गर्छन् । जसमा व्याट्रीको प्रयोग गरिएको हुन्छ र प्रयोग गर्दा भाइब्रेट हुन्छ ।<br>
सेक्सट्योजले पुरुषको शीघ्र स्खलन कम गराउने ढकाल बताउँछन् । ‘पार्टनरको चाँडै स्खलन भयो भने यसको प्रयोग गर्दा शीघ्र स्खलन कम हुन्छ’ उनी भन्छन् ‘जसले गर्दा महिलाहरु पुरुष सेक्स टोयज प्रयोग बढाइरहेका छन् ।’ यसको प्रयोगले चाडै विर्यपतन नहुने उनले वताए । उनका अनुसार धेरैजसो ग्राहक ३० वर्षमाथिका छन् । ‘धेरैजसो ३० देखि माथिका मानिसहरु आउने गरेका छन्’ उनले भने ‘त्यसमा पनि श्रीमान श्रीमतीबीचको सम्बन्धले असन्तुष्ट र श्रीमान श्रीमती छुट्टिएर बसेकाहरु बढी छन् ।’<br>
ढकालले ९० प्रतिशतले अनलाइनबाट सामान अर्डर गर्ने गरेका छन् भने १० प्रतिशत मात्र ग्राहकले पसलमा आएर सामान रोजेर किन्ने गरेका छन् । धेरैजसो विदेशमा बसेकाले आफू र आफ्नो श्रीमतीका लागि सेक्सट्योज किन्ने गरेको उनी बताउँछन् । ‘विदेश जानलागेका मानिसहरु बढी आउँछन्’ उनले भने, ‘आफूले किनेर पनि लैजाने र घरमा श्रीमतीका लागि पनि किनीदिने हुन्छन् ।’<br>
प्रयोगकर्ता कस्ता छन् ?
सेक्सट्योजको प्रायः श्रीमान श्रीमती सँगै नहुनेले प्रयोग गरे पनि अन्य बर्गका मानिसहरुले पनि त्यतिकै प्रयोग गर्ने गरेको ढकालले वताए । उनका अनुसार श्रीमान श्रीमतीबीचको सम्पर्कबाट असन्तुष्ट भएकाहरु पनि सेक्सटोयज किन्न आउने गरेका छन् । सेक्सट्योजबारे बुझेका र विदेशमा बसेर पढे लेखेका मानिसहरुले यसको प्रयोग गर्ने गरेको उनी बताउँछन् ।<br>
धेरैजसो सम्पन्न परिवारका मानिसहरु, डाक्टर, राजनीतिज्ञ, ब्यापारी, खेलाडी र कलाकारले पनि सेक्सट्योज प्रयोग गर्ने गरेको उनी बताउँछन् । ‘म नाम लिन्न डाक्टर, राजनीतिक दलका नेता, कलाकार र खेलाडी पनि सेक्सट्योज किन्न आउँछन्’ उनले भने, ‘ती मध्ये धेरै माक्स लगाएर किन्न आउने गर्छन् । उनको पसलमा श्रीमान श्रीमती पनि सँगै सेक्सट्योज किन्न आउने गरेका छन् । ‘श्रीमान श्रीमती पनि सेक्सट्योज किन्न आउँछन्’ उनले भने ‘आफैं हेरेर कुन उपयुक्त हुन्छ छानेर लैजान्छन् ।’ सुरुसुरुमा साउदी अरवमा सेक्स टोयज निर्यात गर्ने गरेका ढकालले अहिले यहीँ बढी खपत हुने गरेको वताए ।
सेक्सट्योज किन्न ३० बर्ष उमेर भएका देखि ७५ बर्षसम्मका पनि आउने गरेको छन् । त्यसमा पनि ३० देखि ५० बर्ष उमेरका मानिसहरु बढी आउने गरेको उनी बताउँछन् । टिनएजर भने सेक्सट्योज किन्न आउने गरेका छैनन् । उनको पसलमा ६५ बर्षका महिलाले पनि सेक्सट्योज किन्ने गरेका छन् । ‘७० देखि ७५ बर्षका बुढाहरु पनि आउने गरेका छन्’ उनले भने ।<br>
कस्ता सेक्सटोयज बढी बिक्छन् ?
उनको पसलमा दैनिक ५ वटासम्म सेक्सट्योज विक्री हुन्छ । महिला र पुरुषका लागि पसलमा करिव ५ सय प्रकारका सेक्सट्योज राखिएका छन् । उनका अनुसार महिलाहरुले बढी र्याबिट, जि–स्पट र डिल्डो जस्ता लिङ्ग आकारका भाइव्रेटर भएको टोयज बढी प्रयोग गर्छन् । जसमा व्याट्रीको प्रयोग गरिएको हुन्छ र प्रयोग गर्दा भाइब्रेट हुन्छ । ‘महिलाहरु बढी डिल्डो नामको लिङ्ग आकारको भाइव्रेटर भएको सेक्सट्योज बढी प्रयोग गर्छन्’ उनले भने, ‘जसमा भाइब्रेटरका लागि ब्याट्रीको प्रयोग गरिएको हुन्छ ।’<br>
पुरुषहरुले भने फ्लेसलाइट, मास्टवेटर, पुसि–मास्टरवेटर, एनल मास्टर, भाइव्रटिङ मास्टर वेटर प्रयोग गर्ने गरेका छन् । उनका अनुसार ती मध्ये पुसि–मास्टरवेटर बढी पुरुषहरुले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । ‘पुसि–मास्टरवेटर महिलाको सिलिकनबाट बनेको हुन्छ’ उनले भने, ‘जसले पुरुषलाई बढी सन्तुष्टि दिन्छ ।’ पुसिले पुरुषको तापक्रमलाई अटोमेटिक लिएर ताप पनि बढाइदिने उनले वताए । सवभन्दा मंहगो सेक्सट्योज डली हो । ५० हजार मूल्यको डली सम्पन्नशाली व्यक्तिले किन्ने गरेका छन् । बर्षमा ६० वटा सम्म विक्री हुने डली सिलिकनबाट बनेको हुन्छ । यसमा पनि अटोमेटिक तापक्रम हुने गर्दछ ।
सुरुमा पसल खोल्दा ढकाललाई सेक्सट्योजको व्यापार नचल्ना भन्ने चिन्ता लागेको थियो । तर विस्तारै विज्ञापन भएपछि व्यापार फस्टायो । अहिले बर्षेनी २० प्रतिशत व्यापार बढेको उनी बताउँछन् । उनले काठमाडौंपछि पोखरामा पसल खोलेका थिए । तर पोखरामा त्यति चलेन र बन्द गरे । ‘पोखरामा एकले अर्कोलाई चिन्ने डरले पसलमा आएर किनेनन्’ उनी भन्छन्, ‘त्यहाँका मान्छे पनि काठमाडौ आएर अर्डर गर्न थाले । अनि पोखराको पसल बन्द गर्यौं ।’ डेनमार्कमा काम गर्न गएका वेला त्यहाँ देखेर उनले ४ बर्षअघि सेक्सट्योज व्यापार सुरु गरेका हुन् । उनी व्यापारबाट सन्तुष्टि भए पनि घरपरिवारले भने रुचाएको छैन । उनी सेक्सट्योजले वलत्कार, बाहिरी खर्च र मानसिक रोग कम गराउने दाबी गर्छन् ।
Sat-Mar-2018, 02:27 am मा प्रकाशित, 120 जनाले हेर्नुभयो